समृद्ध नेपालमा योग्यताको कदर हुँदैन हो प्रधानमन्त्री ज्यू ? – Insurance Khabar
समृद्ध नेपालमा योग्यताको कदर हुँदैन हो प्रधानमन्त्री ज्यू ?
प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७५, शुक्रबार १०:५९
मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रमेश कुमार पोखरेल नियुक्त भए ।लोक सेवा आयोगले सिफारिश गरेकोमध्ये तेस्रो नम्बरमा परेका पोखरेललाई नियुक्त गरियो । आयोगले पहिलो नम्बरमा सिफारिश गरेको डा.दामोदर बसौला र दोस्रो नम्बरका श्रीमान् कार्कीलाई वेवास्ता गरी पोखरेललाई नियुक्त गरियो ।
प्रधानमन्त्री ज्यू पहिलो नम्बरमा परेका बसौलाले बीमा बिषयमा विद्यावारिधी हासिल गरेका छन् । उनको योग्यताको र प्रस्तुतीको आधारमा नै आयोगले उनलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिश गरेको हो । तर, तपाईको सरकारले उनको योग्यताको कदर भने गरेन । त्यति मात्रै हैन बसौला राजनीतिक रुपमा पनि तपाईकै पार्टी समर्थित नै हुन् । यद्यपी उनले बर्षो देखि समर्थन गर्दै आएको तपाईको पार्टीगत नाताको आधारमा पनि उनको योग्यताको पहिचान गरेन । त्यतिसम्म त ठिकै थियो । दोस्रो नम्बरमा परेका श्रीमान् कार्कीलाई पनि अवसर दिईएन । उनीसँग पनि बीमा क्षेत्रको लामो अनुभव थियो । तर, उहाँलाई पनि किन अवसर दिईएन ? बीमामा नै विद्यावरिधि गरेका र बीमा क्षेत्रको अनुभव भएका व्यक्तिलाई छाडेर कस्तो समृद्धि होला प्रधानमन्त्रि ज्यू ?
आयोगले नै पहिलो नम्बरमा छनौट गरेपछि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने निश्चित भै पोखरा देखि काठमाडौमा बसेका बसौलाले योग्यता भएर पनि अवसर पाएनन् । सरकारको निर्णय पछि निराश भएका बसौलाले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै भनेका छन् भष्ट्राचार पैसा खाएर मात्रै हुँदैन । योग्य, दक्ष, विज्ञ व्यक्तिलाई ठाउँ नदिनु पनि भष्ट्रचार हो भनेका छन् ।
योग्य व्यक्तिले अवसर नपाएको यो पहिलो घटना मात्रै हैन । यहि घटना बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तको प्रक्रियामा डा.रविन्द्र घिमिरेले पनि भोगी सकेका छन् । २०७३ साल पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन क्षेत्रिय निर्देशक चिरञ्जीवी चापागाईलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त ग¥यो । अन्तिम तीन जनामा परेका डा.रबिन्द्र घिमिरे र रमेशकुमार भट्टराईलाई पाखा लगाएर मन्त्रिपरिषद्को बैेठकले उनलाई नियुक्त गरेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यति बेला पनि डा.घिमिरे आफु बीमा विषयमा नै विज्ञता हासिल गरेको योग्यताको आधारमा नियुक्त हुनेमा निश्चित थिए । त्यसमा पनि उनले माओवादी पार्टीलाई योगदान पुराएका थिए । त्यसैले आफनो योग्यता र राजनीतिक आस्थाका कारण घिमिरे नियुक्त हुने पक्का पक्की थियो । चार दिन अगाडी बसेको बैठकले उनलाई नै नियुक्त गरेको भन्ने समाचार पनि प्रकाशनमा आयो । उनलाई सबैले बधाई पनि दिए । तर, चार दिन पछाडी मन्त्रायले चापागाई नियुक्त गरेको सुचना दियो ।
अध्यक्षको नियुक्त हुने निश्चित भएपछि एकसाता देखि काठमाडौमा बस्दै आएका घिमिरे निराशा हुँदै फर्के ।
नियुक्त हुन के चाहिन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ?
बास्तवमा सरकारले कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्दा कस्तो खालको योग्यतालाई हेर्छ त प्रधानमन्त्री ज्यू ? साधारण रुपमा बुझने हो भने योग्यता, अनुभव, क्षमता र प्रस्तुतीलाई नै हेरेर नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । तर, सरकारले नियुक्त गर्दा त यस्तो सुचकलाई आधार बनाएको पाईएन । त्यसो भने के चाहिन्छ त प्रधानमन्त्री ज्यू नियुक्तीको लागी ?
बीमा क्षेत्रमा प्राय जसो बैंकिङ्ग क्षेत्रको दबदबा छ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई बीमा क्षेत्रलाई सजिलै सम्हाल्न सक्छ भन्ने मान्यता छ । तर, प्रधानमन्त्री ज्यू बैंक र बीमा फरक बिषय हो । बैंक भनेको पैसा राख्ने र कर्जा दिने ठाउँ हो । बीमा भनेको अरुको जोखिम सुरक्षण गर्ने संस्था हो । कुनै पनि क्षेत्रलाई अगाडी बढाउँन सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता भएको व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने बिषयमा त यहाँलाई अवगत नै होला । तर, बीमा क्षेत्रमा विज्ञता भएका व्यक्ति हुदा हुँदै पनि किन अवसर प्रदान गर्नु भएन त ? तपाईले देखेको समृद्धि मुलुकमा योग्यताको कदर हुँदैन प्रधानमन्त्री ज्यू ? हुन्छ भने किन अवसर दिनु भएन । हुँदैन भने खोक्रो समृद्धिको सपना जनतालाई नबाढ्नुहोस ।